LP – DCPM – Auston College Myanmar
Reports say that Construction Project Managers are in higher demand than Civil Engineers.
အပြန်အလှန်အပေးအယူရှိတဲ့ စာသင်ခန်းတွင်း လှုပ်ရှားမှုတွေ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သင်ကြားမှုစနစ်တွေမှာကျောင်းသားတွေက ၈၀ ရာနှုန်းလုပ်ဆောင်ရပြီး ဆရာတွေက ၂၀ ရာနှုန်းပါဝင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ များများလက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်မှသာ ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်စေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သင်ရိုးတွေဟာ အနာဂတ်တွင်လိုအပ်လာမည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သိမှတ်မှုများကို ရည်ရွယ်မျှော်မှန်း၍ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ဒီပညာရပ်တွေကို နားလည်ဖို့ ပုံမှန်အားဖြင့် သင်တန်း ၂ခု ၃ခု ထပ်မံတက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် Auston သင်ရိုးမှာတော့ အားလုံးပါဝင်ပြီးသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပလိုမာပြီးမြောက်ပြီး သွားရင်တော့ Auston စင်ကာပူသို့မဟုတ် Auston သီရိလင်္ကာမှာ ဆက်လက်ပညာ သင်ကြားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Auston ရဲ့ Partner ဖြစ်တဲ့
–	Coventry University
–	London South Bank University
–	Kingston University
–	University of Wolverhampton
–	Birmingham City University နှင့် အခြားတက္ကသိုလ်များစွာမှာဆက်လက်ပညာ
အနာဂါတ်လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းမယ့် ဘာသာရပ် ၇ ခုကို ၈လကြာသင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်နှင့် ညီမျှတဲ့ Programme ဖြစ်ပါတယ်။
1. Construction Technology Services
4. Law, Economics, and Management
4. Design Project for Construction Managers
Diploma ကို Auston Institute of Management, Singapore ကပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုနှစ်မှ စတင်ပြီးကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကို အင်ဂျင်နီယာ ၊ IT နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု နယ်ပယ်များတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိစေရန်ကူညီပေး